Ny pudding dia heverina ho dessert Anglisy. Omano avy aminà ronono, siramamy, atody ary kômpera - lafarinina na vovoka. Ankehitriny dia holazainay aminao ny fomba hanamboarana lavanila mofomamy sy malefaka.
Ny fikarakarana ny lavanila lavalava
sira - 6 tbsp. lovia kely;
tsiry maitso - 5 tbsp. lovia kely;
Amin'izao volavolana manontolo izao, dia mamoaka ronono 1 kaopy, ary ny ambiny dia mahandro. Ao anatin'io rotsak'orana io, ao anaty famokarana mangatsiaka mangatsiaka, avy eo mamaky atody, manampy siramamy sy vanillin mba hanandrana. Vetivety dia lozabe avokoa izany rehetra izany, ary avy eo dia ny volavolan-tsolika miparitaka dia mandatsaka ronono mandro sy manondraka indray. Amin'ny kitay kely mahandro miampy 5 - tokony ho miloko mena izany. Eto, raha ny marina, izany rehetra izany. Mandatsaka ny volom-borona isika ary mamay azy. Aorian'izany, hametraka ny tsindrin-tsakafo eo amin'ny takelaka fiaramanidina iray ary atsipazo amin'ny siramamy na siro.
Vanilla mandatsaka ao anaty lafaoro
Ambarao anao izao ny fomba hanamboaran-dravina ao anaty lafaoro. Ao anatin'ilay ravin-koditra ao anaty ronono, ampio siramamy ary manaova fofona maivamaivana, ka dia levona ny siramamy. Tsy ilaina ny manondraka ny ronono. Ao anaty vilia iray, aforeto ny atody ary asio ny fotsy miaraka amin'ny zozoro, fa aza atao kilalao. Aorian'izany, ny vovobony dia voasivana tsara mba hahatonga azy ho manirery. Omeo ronono miaraka amin'ny siramamy izy, atsangano ary ampio ny voankazo lavanila, izay diovina mivantana avy eo amin'ny feta.
Indray mandeha ihany koa dia voahangona tsara ny zava-drehetra ary natsipy tao anaty baolina, ary avy eo naparitaka tamin'ny foitra ary napetraka tao anaty lafaoro, natolony ho 150 degre, nandritra ny 20 minitra. Aza atao tsinontsinoavina avy hatrany ny foibe, avelao ny pudding hatsikana ao anaty baolina, ary esory ilay foibe. Ary avereno ao anaty lovia ny hazokely hazavana ary alamino izany amin'ny sitrapo.
Mofomamy vita amin'ny sôkôla
Milanja - 0.5 litatra;
koba - 3 tbsp. lovia kely;
kakao - 3 tbsp. lovia kely;
Vanilan'ny siramamy - 3 sachets.
Ny sikidy dia mifangaro amin'ny lafarinina ary manondraka ilay ratra ho ronono mangatsiaka. Dia afafeto ny afo, ento amin'ny lavaka fanasan-damba ary afafazo mandritra ny 3 minitra, mba ho vongotra kely ilay izy. Aorian'izany, ampio ny dibera voapetaka, mifangaro ary zarao ny volkano hitambatra ho 2 isa mitovy. Amin'ny iray amin'izy ireo dia mandatsaka siramamy lavanila isika, ary amin'ny faharoa dia ampiana kakaô izahay. Indray mandeha, dia mifangaro ireo akora roa ireo mba hanosihan'izy ireo bebe kokoa. Mampidina ny volom-bala ao anaty baolina isika - fotsy fotsy na fotsy ary mifamadika amin'ny sôkôla. Maniraka azy mandritra ny adiny iray mankany amin'ny vata fampangatsiahana izahay. Aorian'izany, manompy sôkôla eo amin'ny latabatra isika.
Mofomamy mamy miaraka amin'ny menaka
Bagels amin'ny toeram-pananahana
Voankazo mofomamy homamiadana
Ahoana ny fomba hanamboarana ilay poti-mofo?
Donuts from cheese cottage
Raffaello - karazan-tsakafo mahavariana ao an-trano
Karazan-tsakafo karokaroka no fomba mahazatra
"Ronono misy voromailala" - fanaka ho an'ny mofomamy, siramamy ary mofo ao an-trano
Kitapom-bokatra mofomamy, akondro ary mena
Harona tena ilaina amin'ny voaloboka
Ahoana no hamantarana ny firaisana amin'ny ankizy eo amin'ny latabatra Vanga?
Cheesecakes ao amin'ny multivark
26 sarin'ny olo-malaza amin'ny fomba famolavolana
Sakafo mangatsiaka ho an'ny ririnina
Hantsana ho an'ny vehivavy bevohoka
Afaka omen'ny reny ny zaza kamboty?
Ireo lehilahy efatra mitam-piadiana mitafy akanjo mahery setra, ary tsy mahagaga izany!
Nahoana ny lehilahy no mitomany?
Souion onion miaraka amin'ny salmon
Fanamafisana ny rafi-pitabatabana
Nahoana no ilaina ny laisoa vaovao?
Manamboara lalantsara ety - milalao eny amin'ny habakabaka